UE Wonderboom 2 ukumelana, inamandla kunye nemowudi entsha yokuPhucula ngaphandle | Iindaba zeGajethi
Ukuba kukho isandisi-lizwi esizimeleyo esilungele ukulwa kwiindawo "ezinobutshaba" ezinjengeentaba okanye ulwandle ngoku imozulu entle isiza, ngokungathandabuzekiyo yiWonderboom. Kule meko inkampani iveza imodeli yayo entsha yeWonderboom, Wonderboom 2.
Njengoko unokufunda kwisihloko, i-Wonderboom 2 entsha isinika ukuxhathisa okukhulu kukothuka, amanzi nothuli, ikwanamandla ngakumbi kunemodeli yangaphambili kwaye yongeza imowudi entsha nesandi esiphuculayo kwixesha esizifumanayo kude nekhaya kwaye sihamba nayo, yile nto eyenzelwe yona isithethi esitsha, esincinci nesinamandla esisayinwe ngu-Ultimate Ears.
Thenga apha i-Wonderboom 2 yakho ngombala owufunayo
1 Ukuphuculwa kobuhle xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili
2 Yeyiphi imowudi yokunyusa yangaphandle yale Wonderboom 2 intsha?
3 Ukumelana namanzi, ukudada kunye nokuchasa amaqhuma
4 Umgangatho wesandi sesi sithethi sitsha
5 Ukuphuculwa kwenkululeko kwiWonderboom 2 entsha
6 Ixabiso leWonderboom 2, imibala kunye nokufumaneka
7 Izimvo zoMhleli
Ukuphuculwa kobuhle xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili
Kule meko sinokuthi zombini izithethi, iWonderboom kunye neWonderboom 2 ziyafana ngokwendlela yoyilo kunye namaqhosha okuphucula okanye ukunciphisa ivolumu. Kodwa kule nguqulo yesibini inkampani ibeka ugxininiso olukhethekileyo phucula ilaphu langaphandle lezithethi ezenza ukuba zinganyangeki kwaye zinike isimbo esahluke kancinane kwiWonderboom 2 xa sinaso ecaleni kwemodeli yangaphambili.
Olunye utshintsho esiluqaphelayo ekuqaleni kuyacaca ukuba yiteyiphu esinokuxhonywa ngayo esi sithethi naphina. Kule Wonderboom 2 intsha ndiyandisile kwaye ndayitshintsha uyilo lwentambo ukuze lube nolundi apho ilogo yomsayino ivela. Konke oku kwenza ukuthuthwa kube ngcono ngakumbi kule modeli kwaye kukhuseleke. Ngokwasemzimbeni zinokubonakala zifana, kodwa ngokwenene ziimodeli ezineyantlukwano ezimbalwa kwaye enye yazo liqhosha elisezantsi elenza imo entsha yokuPhucula ngaphandle, esiza kuthetha ngayo ngoku.
Yeyiphi imowudi yokunyusa yangaphandle yale Wonderboom 2 intsha?
Eyona nto iyenza yahluke le Wonderboom 2 yile Imowudi yokunyusa yangaphandle. Eli linqaku elitsha elenza ukuba abasebenzisi babe namava angcono okulalelwayo nakweyiphi na indawo engaphandle njengoko isandi siya sicaca ngakumbi nangakumbi. Konke oku kulungiswa sisithethi ngokwaso, ke umsebenzisi kufuneka akhethe phakathi kokuvula le ndlela okanye hayi.
Ukwenza oku kuKwenza kwangaphandle kufuneka sikwenze oko Cinezela ezantsi kwesithethi kwiqhosha elinomfanekiso womthi womthi. Njengoko i-Ultimate Ears CEO uCharlotte Johs echazile, baphucule isandi esingu-360 ° okanye sicace gca ngaphandle kwaye amava e-stereo ayinyani ngoku:
Siwuthathile umculo ekuhambeni ngakumbi, kunye neempawu ezintsha zomsindo ezihambelana nemo engaphandle kunye nesakhono sokuva isandi sokwenene sestereo xa izithethi ezibini zeWonderboom 2 zidityaniswa ngaxeshanye. Ngoku umsebenzisi angathatha umculo naphina kwaye onwabele ngokucacileyo isandi esingama-360 kuyo nayiphi na imeko imini yonke.
Ngokusebenzayo ngoku iWonderboom 2 entsha inokuvumelaniswa kwaye inene ikhuphe isandi sestereo xa sinezithethi ezibini. Ngale ndlela, ukukwazi ukonwabela umgangatho wesandi sezithethi ezibini ze-Wonderboom 2 kuyamangalisa ngokwenene, nokuba kungumxholo wemultimedia okanye umculo wethu esiwuthandayo.
Ukumelana namanzi, ukudada kunye nokuchasa amaqhuma
Ayinakuba yenye into kwaye kungenxa yokuba iWonderboom ibonakaliswa kukunganyamezeli okukhulu kwaye ifanelekile ukubasa elwandle, ezintabeni okanye naphina ngaphandle kwamaxhala. Kwinkcazo ke kwathiwa olona vavanyo lubalaseleyo lwaso nasiphi na isixhobo yayikukushiya umntwana kwaye singatsho ukuba babambelela kakuhle. Kodwa eyona nto iphambili kwezi Wonderboom 2 kukuba ziyakwazi ukumelana namanzi ngesatifikethi se-IP67, ke bayaxhathisa isiqingatha seyure emanzini angaphantsi kwemitha enye ngokugqibeleleyo.
Ewe iWonderboom 2 entsha ine-buoyancy enomtsalane ke ungakhathazeki ukuba iwela echibini. Ke ngoku asinasizathu sakuzixolela thatha ezi zithethi uzise elwandle okanye echibini kwaye wonwabele umculo wethu naphina.
Umgangatho wesandi sesi sithethi sitsha
Singena kwezona zinto zibaluleke kakhulu kwaye ngumgangatho yeaudio namandla ezi zithethi zintsha. Singatsho ukuba ngale ndlela u-Ultimate Ears yenye yeenkampani ezenza lo msebenzi wokongeza amandla kwizithethi zazo kwaye iWonderboom 2 ayinakukuphoxa malunga noku. Amandla aso ayamangalisa indlela esincinci ngayo esi sithethi ngokwemilinganiselo, ubungakanani obuthe ngcembe kunemodeli edlulileyo kodwa obungafaniyo ekuboneni kuqala: 10,4 x 9,5 x 9,5 cm kunye no-422 g
Ukukhetha kwe Ukumataniswa kabini kwestereo Inika ezi Wonderboom 2 elinye inqanaba kwaye kukuba beza baxhotyiswa ngee-bass ezingakumbi ngenxa ye-cutoff frequency esezantsi, ke umgangatho wezandi abazikhuphileyo uphuculwe kakhulu kwaye xa ubeka ezimbini ngokudibeneyo kuyamangalisa ngokwenene. Umgangatho yeaudio yezi zithethi awukhohlisi kwaye sinokuqiniseka xa siyithenga ukuba sifuna ukumamela umculo osemgangathweni.
Iindlebe zokugqibela ziguqula indlela abantu abanamava ngayo kumculo weqela, naphi na apho bakhoyo. Ekuqaleni, iiNdlebe eziGqithisileyo zaguqula indlela abanxibelelana ngayo nabaphulaphuli bekonsathi yabo okokuqala ngqa ngokubuyisela esweni kwinqanaba, beliguqula laba yintloko yesiqhelo. Namhlanje, iindlebe zokugqibela, uphawu lweLogitech lwaMazwe ngaMazwe, luyaqhubeka nokuzisa umculo ebomini.
Ukuphuculwa kwenkululeko kwiWonderboom 2 entsha
Ibhetri yezi Wonderboom 2 zintsha ziyakwazi ukubamba ngevolumu ephakathi malunga neeyure ezili-13 ngokutsho komenzi. Kwimeko yethu asikhange silibala ixesha elidlulileyo okoko senza intlawulo yokuqala ukuya kwelona liphezulu, kodwa ezo yure zili-13 zininzi nangakumbi ukuba asisoloko sinesithethi sangaphezulu kuphahla. Ngokucacileyo oku kuyaphucuka kwimodeli yangaphambili ethi, nangona iyinyani yokuba yayizimele kakuhle, imodeli entsha iyayigqitha.
Thenga iWonderboom 2 entsha ngoku
Ixabiso leWonderboom 2, imibala kunye nokufumaneka
Ixabiso lale modeli intsha yeWonderboom 2 liphawulwe kwi-99,99 euro ke ixabiso lemodeli edlulileyo lilingana ngexesha lokumiliselwa kwayo. Isithethi esingabizi mali esele sikhona ukuthengwa elizweni lethu Ukusuka kwiwebhusayithi ye-Ultimate Ears.
Ngokuphathelele imibala ekhoyo, imodeli entsha yenkampani inemibala emihlanu ekhoyo: Ubunzulu boMnyama oMnyama (Mnyama), Umkhenkce otyunyuziweyo (Grey), oBomvu ngokuBomvu (oBomvu), iBermuda Blue (Luhlaza) kunye nePeach nje Le yokugqibela iya kubakho ukuthengiswa ukusukela ekupheleni kukaJulayi yiyo kuphela ke esele igcinwe, okuseleyo sele kungathengwa.
I-ender yokugqibela evakala Wonderboom 2
Umothuko kunye nokuxhathisa kwamanzi
Ayifaki ukutshaja ngaphandle kwamacingo njengomzalwana wayo omkhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Izithethi » Sivavanye i-UE Wonderboom entsha 2. Yomelele ngakumbi, inamandla ngakumbi kwaye inemowudi yokuNyusa yangaphandle